“Awoodaha Paul Pogba shaki kuma jiro.” – Bruno Fernandes – Gool FM
(Manchester) 02 Jan 2021. Ciyaaryahanka qadka dhexe kooxda Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa difaacay saaxiibkiis Paul Pogba, isagoo xusay in qof walba uu ogyahay heerka ay gaarsiisan tahay awooda xiddiga reer France.
Laacibka reer France ee Paul Pogba ayaa la kulmay dhaleeceeno badan sababa la xiriira heerkiisa ciyaareed ee kooxda iyo dhaawacyada soo noqnoqday ee soo gaaray xilliyadii la soo dhaafay.
Paul Pogba ayaa ku muujiyay qaab ciyaareed fiican kooxda Manchester United ciyaartii ugu dambeysay oo ay la ciyaareen Aston Villa, wuxuuna keenay rigooradii uu dhaliyay Bruno Fernandes, taasoo sababtay inay gacanta ku dhigaan saddexda dhibcood.
Bruno Fernandes ayaa wareysi uu ku bixiyay Website-ka rasmiga ah ee kooxda Manchester United, wuxuu ku sheegay:
“Waxaan u maleynayaa in Paul Pogba uu si fiican u ciyaaray kulankii Aston Villa.”
“Qof walba wuu ogyahay tayada iyo awooda Paul Pogba, waxaan u maleynayaa inuusan shaki ku jirin.”
“Waxaan rajaynayaa in jamaahirta kooxda aysan wax shaki ah ka muujin doonin Pogba, sababtoo ah isagu wax badan ayuu inaga caawiyaa, wuxuuna sabab u ahaa goolkeygii Manchester United ee kulankii Aston Villa.”
“Wuxuu siiyaa kooxda wax badan, wuxuuna kalsooni badan ka heli doonaa kulamada soo socda.”